September 2010 ~ စန္ဒကူး
ငါးချဉ်စားချင်တာကြာပါပြီ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ နောက်ပိုင်း စားချင်တဲ့စိတ်ကိုမေ့မေ့လျော့လျော့ ထားထားတာ၊ အရင်အပတ်က ကျောင်းတက်နေတဲ့ မြန်မာ မိသားစုအိမ်သွားလည်ရင်းနဲ့ သူငါးချဉ်စမ်းလုပ်ထားတဲ့အကြောင်း၊ အောင်မြင်တဲ့အကြောင်း၊ အဲဒီနေ့က ငါးချဉ်ဗူးကိုဖွင့် သူကိုယ်တိုင်ကြော်ပေးပါတယ်။ ငါးချဉ်ဗူးကိုချောင်းကြည့်တော့ ထမင်းလုံးမာမာလေး တွေတွေ့တယ်..အဲဒီမာတဲ့ထမင်းက မကျက်သေးတဲ့ထမင်းနဲ့တူတယ်။ သူက နောက်မှအေးဆေး လုပ်နည်းပြောပြမယ်ဆိုပြီးအဲဒီနေ့ အခြားအကြောင်းတွေဆီ စကားဆက်ရောက်သွားတာနဲ့ ကျွန်မပြန်လာတဲ့အထိ သူပြောဖို့မေ့သွားတယ်။
မျက်စေ့ထဲမှာ အဲဒီငါးချဉ်ဘဲစွဲနေတာကြောင့် ငါးသွားဝယ်ပီး လိုချင်တဲ့အတုံးအနေခုတ်ခိုင်း တယ်။
ဒီငါးက ငါးသလောက်လိုဘဲ..မြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲမသိ၊ အရိုးသေးသေးမွှားမွှားတွေ အရမ်းများတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်မလုပ်တဲ့နည်းလေးပါ..
ငါးကိုအကြေးခွံကျန်တာလေးတွေနဲ့ ဗိုက်ထဲက ဟာလေးတွေကိုသေချာဆေး။
ပြီးရင်တော့ ဆားကြမ်းနဲ့ နယ်ပီး ၃ နာရီလောက်နှပ်ထားပါတယ်။
ငါးဆားနယ်ထားတဲ့အချိန် ထမင်းကိုစချက်ပါတယ်၊ ထမင်းအိုးမီးမပြောင်းခင် ဆန်မကျက်ခင် လေးမှာ ထမင်းလိုသလောက်ခပ်ထုပ်ပါတယ်။
ဆားနယ်ပြီးနှပ်ထားတဲ့ငါးကို ရေနဲ့ဖွဖွလေးပြန်ဆေးပါတယ်.. ပြီးရင်ရေခဏစစ်ထားပါ။
ရေစစ်ပီးသားငါးကို ဆားနယ်ထားတဲ့ထမင်း (မကျက်သေးတဲ့ထမင်း) နဲ့သိပ်ပီးနယ်ပါ။
မနက်ပိုင်းနဲ့ ညနေပိုင်း ၃ နာရီလောက် (ခန့်မှန်း) နေပြပါ။
၃ ရက်လောက်မှာတော့ဗူးဖွင့်ပြီး ဆီ/ရေစုပ် အ၀တ်နဲ့ဗူးအ၀ကိုလုံအောင်ပိတ်ပီး ဇောက်ထိုး (၂) နာရီလောက်ထားပါတယ်..ဗူးဖွင့်လိုက်ရင် ရောင်းတဲ့ငါးချဉ်အနံ့လို ရနေပီ။ (မမလုလုကို လှမ်းမေးတော့ ဇောက်ထိုးထားလို့ပြောတယ်၊ အထဲကအရည်တွေစစ်ထွက်သွားအောင်၊ မေးတဲ့ရက်က ၃ရက်မြောက်ဖြစ်နေပီ ၊ ဟီးး)
ငါးချဉ်ဗူးကရေအများကြီးတော့မထွက်ပါဘူး၊ အသားထဲကနဲနဲစိမ့်ထွက်လာတဲ့အရည်တွေ ဇောက်ထိုးထားတဲ့ အချိန်တွင်းမှာစစ်သွားပါတယ်။
ကျွန်မ ငါးချဉ်စားရင် ငါးသတ်သတ်သာပိုနှစ်သက်တာမို့ ထမင်းတွေအကုန်ဆေးပစ်လိုက် ပါတယ်။
ငါးအသားချဉ်းဗူးလေးထဲပြန်သိပ်ထည့်၊ အဖုံးလုံအောင်ပိတ်ပီး ရေခဲသေတ္တာထဲထည့် ထားလိုက်ပါတယ်။
လိုရင်ထုတ်ကြော်စားရုံပါဘဲ။ ငါးအရိုးလေးတွေနဲ့နူးပီးစားလို့အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ငါးအသားလဲ တင်းတင်းလေးရှိနေတုန်းဘဲ။ ချဉ်လဲချဉ်တယ်၊ စိမ့်လဲအတော်စိမ့်ပါတယ်။ ငရုတ်သီးလေးနဲ့ကြော်ရင် အားလုံးခံတွင်းတွေ့မှာ သေချာတယ်။း)
** ကျွန်မရေးပေးထားတဲ့နည်းက ရှုပ်နေရင် ထပ်မေးလို့ရပါတယ်။ comment မှာရေးထားခဲ့ပါ။ blog အိမ်တိုင်ရာရောက်လာဖြေပေးပါ့မယ်။
Posted by စန္ဒကူး at 6:00 PM
ငယ်ငယ်ကလေ သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာထဲက ဆုံးမစာထဲမှာ နောက်ဖေးဈေးဆိုင်တည်၊ ခေါင်းတရာ သားစားပါဆိုတာမှတ်မိကြလားဟင်။
ကဲခေါင်းတရာသားက ငါးဈေးထဲက ရတာဘဲ။
ကျွန်မတော့ ဈေးရောက်တိုင်းငါးဈေးတန်းကို ဖြတ်လေ့ရှိတယ်၊ အစောကြီးဆိုအနံ့သက်လဲ သိပ် မဆိုးဘူး၊ ငါးတွေပေါင်းစုံတွေ့ရတာ အရောင်မျိုးစုံ၊ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ဒီက ငါးတွေက ပင်လယ်ငါးများတော့အရောင်ပိုစုံတယ်၊ ခရမ်း၊အပြာ၊အ၀ါ၊အနီ၊ အဖြူ၊ အစိမ်းနဲ့ နက်ပြာစင်း အကုန်ပါဘဲ။
ငါးလေးတွေကသန့်ပီးဖြောင့်ဖြောင့်လေးတွေမို့စိတ်ဝင်တစားဝယ်လာပါတယ်။ အများကြီးဘဲ... ကီလိုဝက်မှာ 2$ လောက်ကျ တယ်။အိမ်ရောက်မှ ဗိုက်ဖောက်မလိုဟာကို ဗိုက်ထဲမှာ ဥလေးတွေလားမသိ အဲဒါလေးတွေဘဲရှိတယ်၊ မာမာလေးတွေ၊ ချေးကြောင်းလဲမတွေ့..မထူးတော့တာနဲ့ ရေနဲ့ဘဲစင်အောင်ဆေး ချက်လိုက်ပါ တယ်။ ခေါင်းတရာသားအိုးကပ်ပေါ့..း)
ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ နဲ့ ငရုတ်သီးအနီတောင့်၊ ဂျင်းနဲ့စပါးလင်နဲနဲ ထည့် ညက်အောင်ထောင်း
ဆီချက်သတ်ပီးမွှေးမှ ငါးငံပြာရည်နဲနဲထည့် ၊
ခရမ်းချဉ်သီး မမှည့်တစ်မှည့်ကိုအခွံနွှာ..အစေ့ထုတ်ပီး ပါးပါးလှီးထည့်..
အားလုံးနွမ်းလောက်မှ သန့်စင်ပီးသားငါးလေးတွေထည့်..ဆားထည့်.. အချိုမှုန့်စားရင် အချိုမှုန့် နဲနဲထည့်ပါ.. ငါးလေးတွေကချိုလို့အမှန်တော့မလိုပါဘူး။
အဖုံးအုပ်ရင် နူးပျော့ပီး ငါးအသားလေးတွေပဲ့ကုန်တာမို့ စားတဲ့အချိန်ထိအကောင်လိုက်လေး မြင်ချင်ရင်အဖုံးမအုပ်ပါနဲ့.. (ဟီးး×
ကဲကျက်ပါပီ.. အိုးကပ် ခေါင်းတရာသားဟင်းလေး..
ရန်ကုန်ကမထွက်လာခင်လေးမှာ ကိုးရီးယားဆိုင်တွေစဖွင့်နေပီ၊ ကိုးရီးယားကားတွေကြည့် သူတို့စားသလို လိုက်စား ချင်တဲ့စိတ်ကတားမရ.. အဲတုန်းက ကိုးရီးယားစားသောက် ဆိုင်တွေ ဈေးကကြီးကြီး...
ဦးလေးလူပျိုကြီးကို ခေါ်ပြီး အသားကင်သွားစားကြတယ်.. အရန်ဟင်းတွေကအများကြီး..ကင်မ်ချီရော၊ ဂေါ်ရခါးသီး ပါးပါးလှီးကြော်၊ အရွက်ကြော်..စုံနေတာဘဲ.. အသားကင်ရဲ့အရသာတော့ သိပ်သဘော မကျဘူး။ ပေါ့ရွတ်ရွတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒီရောက်တော့ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ ကိုးရီးယား ဆိုင် တွေ မှိုလိုပေါက်နေတာ.. သွားစားပြန်လဲကိုယ့်ခံတွင်းတွေ့မဖြစ်ဘူး၊ စားလဲစားချင်တယ်.. အသားကင် တော့မစားဖြစ်ဘူးလေ ဒီမှာကတော့ ၀က်သားကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေ တယ်..
အရင်အပတ်တောင်ပေါ်တက်ပီးအမဲသားသွားဝယ်တော့ အဲဒီက အမဲသားရောင်းတဲ့ကောင်လေးက ကျွန်မ၀မ်းကွဲ ညီမလေးရဲ့သားငယ်ငယ်လေးကိုကြည့်ပီး အမဲသားကနုတယ်..နင့်ကလေးလို့ဘဲလို့ ပြော တော့ ညီမက..စိတ်ဆိုးရအခက်..ရီရအခက်.. ကျွန်မကသူတို့စကားနားမလည်ဘူးရယ်.. ညီမက ပြန်ရှင်း ပြမှ သိတာ။ အဲဒီနုတဲ့အသားလေးတွေချည်း အသားကင်လုပ်စားမယ်ဆိုပီးဝယ်လာ တယ်။
အမဲသားနုနုလေးကိုပါးပါးလှီးပြီး ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ဆားနည်းနည်း၊ သံလွင်ဆီ အနည်းငယ်နဲ့ ရော နှပ်ထားလိုက်တယ်..
ညနေစောင်းတော့ သူငယ်ချင်းအမကြီးတစ်ယောက် ရောက်လာတာနဲ့ အတော်ဘဲဆိုပီး သူနဲ့ အတူစားကြတယ်။ တစ်ယောက်တည်းတော့မစားလေနဲ့..အရသာမရှိဘူး။။။း))
ဒယ်အိုးပူပူမှာ နှပ်ထားတဲ့အသွာလွှာလေးတွေ တင်.. ကျက်လေးတဲ့အနေထားရောက်အောင်အထက် အောက်လှန်.. ပြီးတော့မှ ဆလပ်ရွက်ကိုဖြတ်၊ အသားဖတ်လေးတင်၊ မုန်လာဥချဉ်လေးထည့်၊ နို့ခဲ လေး နဲနဲထည့်၊ ပြီးတော့ ငရုတ်သီးဆောစ့်..ကိုထည့် ပြီးတော့ အားလုံးထုပ်ပိုးပီး ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်တာဘဲ။ ကောင်းမှကောင်း.. မယုံရင်လုပ်စားကြည့်နော်. .. (အမဲသားအစားအခြားအသားလဲရပါတယ်)
ဒီတစ်ခါတော့မျှစ်စစ်စစ်ရလာပါတယ်။ မျှစ်တောင်မှ ၀ါးစို့လေးဒီတိုင်းရောင်းတာ.. အခွံနွှာပေးမလားဆိုတော့ မနွှာတတ်ဘူးတဲ့.. အဲတော့ ကျွန်မလွယ်တဲ့အိတ်ကိုချ သူတို့ဆီက ဓားတောင်းပီး ထိုင်ခုတ်တော့တာဘဲ..
ဈေးသည်တွေရော..ဈေးဝယ်သူတွေရော မျောက်ပွဲလိုလာဝိုင်းကြည့်ကြတယ်.. အထူးသဖြင့် ကောင်လေး တွေပေါ့.. ဟီးဟီး.. အချို့ အန်ကယ်ကြီးတွေက ဘယ်လိုချက်စားသလဲဆိုတာလာမေးလို့ ကိုယ့် recipe လေးတောင်မျှခဲ့သေးတယ်..း)
Facebook မှာ တစ်ယောက်က share လုပ်ပေးလို့ဖတ်ဖြစ်တယ်၊ သဘောကျလို့ ဘလော့မှာလဲ တင်ထားလိုက်တယ်။ ဘယ်သူရေးလဲ ဘယ်ကလဲတော့မသိပါဘူး။ ရေးတဲ့သူကို ဒီကနေဘဲ ခွင့်တောင်း လိုက်ပါတယ်။ ရေးတဲ့သူကိုသိတဲ့သူရှိရင်လည်း comment မှာချန်ထားပေးပါနော်။
"အားလူးငါးပိဿာဝယ်မလို့ သမီးရယ်။ ဒါပေမယ့် မသယ်နိုင်မှာ စိုးတယ်ကွယ်။"
"မပူပါနဲ့ အဘွား။ အဘွား သယ်နိုင်အောင် ကျွန်မချိန်ပေးလိုက်ပါ့မယ်"
အိမ်ထောင်ပရိဘောဂဆိုင်သို့ လူကြီးတစ်ယောက် ၀င်လာပြီး ဆိုင်ရှင်ကိုမကျေမနပ် ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အိမ်သားသုံးစက္ကူ ပြိုင်ပွဲကျင်းပသည်။ အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်က ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သည်။ စက္ကူလိပ် အလိုအလျောက် လည်လာပြီးလိုသလောက် ဖြတ်ပေးသည်။ ပရိသတ်အားလုံး အံ့သြတကြီး လက်ခုပ်တီး သြဘာပေးကြသည်။
ပြင်သစ်ကိုယ်စားလှယ် မိမိနိုင်ငံထုတ်စက္ကူကို ပြသည်။ စက္ကူသည် Channel No.5ရေမွှေးကဲ့သို့ သင်းပျံ့ထုံကြိုင်နေသည်။ ပရိသတ်များ အလုအယက် နမူနာတောင်းကြသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ် စင်မြင့်ပေါ်မှ ဆင်းလာပြီး အကဲဖြတ် ဒိုင်လူကြီးများကို ဆေးပြားတစ်ပြားစီ ပေးသည်။ ဒိုင်လူကြီးများ နေရာမှထသွားကြသည်။
လူစကားပြောတတ်သော ကြက်တူရွေးကို မိန်းမကြီး ၀ယ်လာသည်။အိမ်သို့ရောက်ရောက်ချင်း ကြက်တူရွေးကို ပြောသည်။
"ငါပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်ပြောစမ်း၊ ကျွန်ုပ်သည် လူဖြစ်သည်။ လူစကားကိုပြောတတ်သည်လို့"
"လက်မထပ်ခင်တုန်းက ငါ့မိန်းမကို ငါဘယ်လောက် ချစ်သလဲဆိုရင် တစ်ခါတလေသူ့ကို ကိုက်စားချင်စိတ် ပေါ်မိတယ်"
ယောက်ျားကြီး စိတ်ပျက်ပြီး ဆိုင်ထဲမှထွက်လာသည်။ နောက်မှ စားပွဲထိုးပြေးလိုက်လာပြီး အော်ပြောသည်။
"ကျွန်တော်တစ်ခု ပြောဖို့ မေ့သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာ ၀က်သားဟင်းလဲ မရပါဘူး"
"အဲဒါကတော့ မည်သူမပြု မိမိမှုပဲ၊ မောင်ရင်သာ အန်ကယ်တို့အိမ်ကို ညနေတိုင်းမလာခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒီလိုဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး"
သမီးရည်စားနှစ်ယောက် ခိုးပြေးကြသည်။ ခရီးတွင်စေရန် တက်စီတစ်စီငှားကာ ကောင်လေး သူငယ်ချင်းအိမ်သို့ သွားကြသည်။ အိမ်ရောက်သောအခါ ကောင်လေးကတက်စီသမားအား ပိုက်ဆံထုတ်ပေးမည် အလုပ်တွင် တက်စီသမားက
"ဒါလင်ရေ။ ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းကျဉ်းလေးဆိုတာ အမှန်ဘဲနော်။ ဒါလင်ရဲ့တတိယဇနီးနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဒုတိယ ယောက်ျားတို့ဟာ ဒါလင် ဒုတိယဇနီးနဲ့ ကျွန်မပထမယောက်ျားပိုင် ပင်လယ်ကမ်းစပ်က တိုက်အိမ်မှာ သူတို့ရဲ့ပျားရည်ဆမ်းခရီးကို ကုန်လွန်ခဲ့တယ်ဆိုဘဲ"
"ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေးဖြေးမောင်းပေးပါနော်.ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် မနေ့ကအမောင်းကြမ်းတဲ့ ဒရိုင်ဘာနဲ့တွေ့တာ ဆေးရုံတက်လိုက်ရတယ်။"
"ဆရာ။ ကျွန်မကို ရှင်းရှင်းပဲ ပြောပါဆရာ။ ကျွန်မအသံက ဘယ်နေရာမှာမှ သုံးစားလို့ မရတော့ဘူးလား"
"ဟာ...ဒီလိုလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ - မီးလောင်တာတို့၊ ရေနစ်တာတို့၊ဓပြတိုက်ခံရတာတို့ဆိုရင် ခင်ဗျားအသံဟာ အစားထိုးလို့ကို မရဘူး။တကယ်ပြောတာ"
လေးနှစ်သားကိုတိုး နှင့် ခြောက်နှစ်သားကိုဖြိုးတို့ မျောက်ညီနောင် သူတို့အဘွားအိမ်သို့ အလည်ရောက်နေသည်။ ညအိပ်ချိန်တွင် မျောက်ညီနောင်အားအဘွားမှ ဘုရားရှိခိုး ခိုင်းဧ။်၊ ဘုရားရှိခိုးပြီးသောအခါ
ကိုဖြိုး။ ။ ဟေ့ကောင် ဘာလို့ အကျယ်ကြီးဆုတောင်းနေတာတုန်းကွ ၊ ဘုရား ကနားမလေးပါဘူး။
ကိုအူ တစ်ယောက် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန် လက်မှတ်ရုံတွင် လက်မှတ်ဖြတ်နေသည်။ တခဏာ အကြာတွင် ကိုအူ တစ်ယောက် လက်မှတ်လာ ဖြတ်ပြန်သည်။ သိပ်မကြာလိုက်လက်မှတ်ရုံသို့ ကိုအူ ပြန်ရောက်လာကာ လက်မှတ် ဖြတ်ပြန်သည်။
လက်မှတ်ရောင်းသူ- (အံသြ စွာဖြင့်) စောစောတုန်းက လက်မှတ်နှစ်ခါ လာဝယ်တာနောင်ကြီးပဲ မဟုတ်လား၊ ဒါကောဆို သုံး ခါရှိသွားပြီနော်။ ဘာလို့လဲဗျ။
ကိုအူ- ဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျ။ ရုံပေါက်က လူပေါ့၊ တော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာကျုပ်လက်မှတ်ကို တောင်းပြီး စုတ်ဖြဲပစ်လိုက်တယ်။
တောစပ်တစ်နေရာတွင် ကိုဖြူ၊ ကို ကြူ နှင့် ကိုအူ တို့သုံးဦးအားရာဇဝတ်မှုဖြင့် သေဒဏ်ပေးရန် ပြင်ဆင်နေသည်။ အစောင့်ဖြစ်သူက ကိုဖြူအား အချုပ်ကားတွင်းမှ ပထမဆုံး ခေါ်ထုတ်လာသည်။ ထို့ နောက် အရာရှိဖြစ်သူကသေနတ်သမားအား ပစ်မိန့်ပေးသည်။(အင်္ဂလိပ်လို အမိန့်ပေး)
ရုတ်တရတ် လူများ အထိတ်တလန့် ဖြစ်သွားပြန်သည်၊ ကိုကြူလည်း ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားပြန်သည်။
ကိုအူလည်း ကျန်လူများကို အတုယူ၍ အော်လိုက် ပုံ က "Fire!"
ဂျွန်- လက်ချောင်း (၇)ချောင်း ပြတ်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ငါလက်ချောင်းတွေပြန်ဆက်ပေးဘူးတယ်၊ ငါဆက်တာ ကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူး အခုသူ ကမ္ဘာကျော် စန္ဒယား ပညာရှင်ဖြစ်နေပြီ။
ဂျော့-မင်းဟာက ဘာဟုတ်သေးလဲကွာ ။ ငါခြေနှစ်ဘက် ပြတ်သွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုခြေထောက် ပြန်ဆက်ပေးခဲ့တယ်၊ ၂နှစ်လောက်လဲကြာရော အဲ့ဒီ့လူက ဧဝရတ်တောင်ကိုတတ်နိုင်သွားပြီကွ။
မိုက်- (အားငယ်စိတ်ပျက်သည့်လေသံဖြင့်)၊ အင်း မင်းတို့တွေ တော်ကြပါတယ်ကွာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) နှစ် လောက်က မြင်းစီးလာတဲ့ဂျော်ကီတစ်ယောက် အရှန်ပြင်းတဲ့ကားနဲ့ တိုက်မိတာ လူကော မြင်းကော ခေါင်းတွေပွင့်ကုန်တယ်၊ ဦးနှောက်တွေကို ဖွေးလို့ ။ အဲ့ဒီ့လူရဲ့ ခေါင်းကို ငါပြန်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် --
မိုက်- အရေးတကြီး နဲ့ဆိုတော့ မြင်းဦးနှောက် နဲ့ သူ့ဦးနှောက် လွဲပြီးထည့်ပေးလိုက်မိတယ်။
အင်တာနက်မှ ဂျော့ဒဘလူဘုခ်ျကို ကျီစယ်သော ဟာသများကို ဆီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ပါသည်။ ဗြုန်းခနဲ ဝလုံးကွဲအောင် ရယ်ရမည် မဟုတ်ပါ၊စိမ့်စိမ့်တွေး၍ ဖြေးဖြေးလေး ရယ်ပါ။
ပထမလူ- ကျွန်တော်အိုင်စတိုင်းပါ ဝင်ခွင့်ပြုပါ၊
တမန် - အိုင်စတိုင်းဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြပါ၊
ထိုအခါ ပထမလူသည် အိုင်စတိုင်းဧ။် သီအိုရီများကို ရှင်းပြလေသည်။ ထို့ကြောင့်
တမန်-ကောင်းပြီ ငါလက်ခံပါပြီ ၊ ဝင်ပါလေ။
ဒုတိယလူ - ကျွန်တော် ပီကာဆိုပါ
တမန် - ကောင်းပြီ ၊သက်သပြပါ၊
တမန်-ဟုတ်ပါပြီ ငါယုံကြည်ပါသည်၊ ဝင်ပါလေ။
တတိယလူ - ကျွန်တော် ဂျော့ဒဘလူဘုခ်ျပါ
တမန် - အင်း အိုင်စတိုင်းနဲ့ ပီကာဆို ကတော့ သက်သေကောင်းကောင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်၊ သင်လည်းပြပါ၊
တတိယလူ - (အတန်ငယ် စိတ်ရှုပ်ထွေးဟန်ဖြင့် စဉ်းစားပြီးနောက်) ၊သူတို့က ဘယ်သူတွေလည်းဗျာ၊
တမန် - ဟာ--ကောင်းပြီ ဂျော့ ငါယုံကြည်ပါပြီ၊ သူတို့အထဲမှာရှိတယ်၊ ဝင်ပါလေ။
(စာရေးသူမှ......> အင်တာနက်မှ ဟာသများကို သင့်လျှော်အောင် ပြန်ဆိုပါသည်။ဘာသာပြန်ညံ့ဖျင်းမှုနှင့် တင်ပြပုံညံ့ဖျင်းမှုကို နားလည်ခွင့်လွတ်ပေးပါရန်။
ဘ၀မှာ စိတ်ညစ်မှုတွေများနေတဲ့သူတွေအတွက် ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ဘ၀အမောပြေလေးများကို ဖတ်စေချင်သောစေနာလေးများဖြင့်စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်)
စာရင်းကိုင်ဆိုတာ...........စာရင်ကိုင်တစ်ဦး ဆရာဝန်ထံရောက်လာပြီး သူခံစားနေရသော ဝေဒနာလေးအား ပြောပြလေသည်။ စာရင်းကိုင်။ ။ ဒေါက်တာ......၊ ကျွန်တော် ညဘက်မှာအိပ်လို့မရဘူး။ဆရာဝန်။ ။ ဒါဆိုရင်......ကိန်းဂဏာန်းတွေ တစ်ကနေပြီး ၅၀၀ အထိ ရေတွက်ပါ၊အိပ်ပျော်သွားပါလိမ့်မယ်။စာရင်းကိုင်။ ။ လုပ်ပြီးပါပြီ......အိပ်မပျော်မပါဘူး ဒေါက်တာ။ ဆရာဝန်။ ။ ခင်ဗျားက ကိန်းရဏာန်း ဘယ်လိုရေတွက်လို့လဲ။စာရင်းကိုင်။ ။ အစဉ်လိုက်ချရေးပါတယ်.။ ရေးရင်းမှားလို့ပြင်ပါတယ်...။ပြင်ရင်းမှားရင်းနဲ့ မိုးလင်းသွားလို့ပါ.။ဆရာဝန်။ ။ ဗျာ...........။
ဈေးကြီးလိုက်တဲ့ ကြက်တူရွေး................ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရောင်းသော ဆုင်တစ်ဆိုင်အတွင်း ၀ယ်သူတစ်ဦး ရောက်ရှိလာလေသည်။၀ယ်သူ။ ။ ကြက်တူးရွေးတစ်ကောင်လောက် လိုချင်တယ်။ဆိုင်ရှင်။ ။ ရပါတယ်။ ဒီကြက်တူရွေးက ဒေါ်လာ ၅၀၀၊ ကွန်ပျူတာကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်တယ်။၀ယ်သူ။ ။ တယ်ဟုတ်ပါလား။ ဆိုင်ရှင်။ ။ ဒီကြက်တူရွေးက ရုပ်မြင်သံကြား ဖွင့်တတ်၊ ပိတ်တတ်ပြီးသီချင်းလည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀။၀ယ်သူ။ ။ မဆိုးပါဘူးဆိုင်ရှင်။ ။ ဒီကြက်တူရွေးကတော့ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ပါ။၀ယ်သူ။ ။ ဈေးကြီးလိုက်တာ ...။ သူကကောဘာတတ်ပါသလဲ.....။ ၀ယ်သူ။ ။ ဘာမှတော့မတတ်ပါဘူး။ဆိုင်ရှင်။ ။ ဟင်ဘာဖြစ်လို့ ဈေးကြီးတာလဲ။ဆိုင်ရှင်။ ။ မနက်တိုင်း ဟိုကြက်တူရွေးနှစ်ကောင်က သူ့ကိုဆရာကြီးလို့ခေါ်နေလို့ပါ။
ကျောင်းဆရာတစ်ဦးက သူကိုယ်တိုင် ထုလုပ်ခဲ့သော ရုပ်တုတစ်ခုကို စားပွဲပေၞ၌တင်ထားကာ ကျောင်းသားများအား မေးမြန်းလေသည်။ကျောင်းဆရာ ။ ။ ဒီရုပ်တုလက်ရာပေၞ မင်းတို့အမြင်တွေပြောရမယ်၊ ကဲ ဂျော်နီထပြီးပြောပါဦး။ဂျော်နီ ။ ။ ဘာရုပ်တုမှန်းကို မသိပါဘူးဆရာ။ ကျောင်းဆရာ ။ ။ မသိရင် အတန်းအပြင်ထွက်၊ မတ်တပ်ရပ်၊ ကဲ ဆန်နီ ထပြီးပြော။ဆန်နီ ။ ။ ကျွန်တော် မတ်တပ်ပဲ ရပ်လိုက်ပါ့မယ် ဆရာ။ကျောင်းဆရာ ။ ။ ဟေ................
မှတ်မိလိုက်ပုံက........လူတစ်ဦးအား တိုက်ပြီးမောင်းပြေးသွားသော ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာသို့ ယာဉ်ထိန်းရဲတစ်ဦးရောက်ရှိလာပြီး အနီးရှိကလေးငယ်များအား အောက်ပါအတိုင်း မေးလေသည်။ယာဉ်ထိန်းရဲ ။ ။ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တော့ မင်းတို့ဒီနေရာမှာ ရှိနေလား။ကလေးငယ် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်။ယာဉ်ထိန်းရဲ ။ ။ ယာဉ်တိုက်တာမင်းတို့ တွေ့မှာပေါ့။ ကလေးငယ် ။ ။ ကျွန်တော်တို့ မြင်လိုက်ပါတယ်။ယာဉ်ထိန်းရဲ ။ ။ ဒါဆိုရင် မောင်းပြေးသွားတဲ့ ကားနံပါတ်ကို မှတ်မိလား။ကလေးငယ် ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ မှတ်မိပါတယ်။ယာဉ်ထိန်းရဲ ။ ။ ဒါဆိုရင် အဲဒီကားနံပါတ်ကို ပြောပြပါဦး။ကလေးငယ် ။ ။ ဂါလန် ၁၅၀၀။ ယာဉ်ထိန်းရဲ ။ ။ ဟေ..................။
မီးသတ်ဌာနသို့ အရေးပေါ်တယ်လီဖုန်းဝင်လာသဖြင့် တာဝန်ကျ အရာရှိတစ်ဦးက ဖုန်းနားထောင်လေသည်။အရာရှိ ။ ။ အမိန့်ရှိပါခင်ဗျ။ဖုန်းဆက်သူ ။ ။ ဆရာ မြန်မြန်လေးလာခဲ့ပါ။ ဒီမှာမီးလောင်နေလို့။ အရာရှိ ။ ။ ဟုတ်လား............ ဘယ်နေရာလဲ၊ နေရာ ပြောပါ။ဖုန်းဆက်သူ ။ ။ စိတ်တွေလှုပ်ရှားလွန်းလို့ နေရာကိုတောင် ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့ဘူး။အရာရှိ ။ ။ ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလာရမလဲ။ဖုန်းဆက်သူ ။ ။ ကားအနီကြီးသာမောင်းလာခဲ့ပါဗျာ။ အရာရှိ ။ ။ ဗျာ.............
"မောင်ဘမောင်. မင်း ဘယ်လို ယောက်ျားလဲကွယ့်။ မင်းမိန်းမကတော့ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ ထင်းခွဲနေတယ်။ မင်းကျတော့ ဒီခုံပေါ်မှာ အေးအေးဆေးဆေးမယ်ဒလင် ထိုင်တီးနေတယ်"
"မတတ်နိုင်ဘူး ဒေါ်ဒေါ်. သူမှ မယ်ဒလင် မတီးတတ်တာ။"
"ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ အိပ်နေတုန်း ကျွန်တော် ၀ီစကီသောက်လို့ မရဘူး"
ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ရန် စောင့်စားနေကြသော လူနာများခင်ဗျား။ မိမိတို့ခံစားနေရသော ရောဂါလက္ခဏာများကို အချင်းချင်း မဖလှယ်ကြပါနှင့်။ ရောဂါဇစ်မြစ်ကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ရှိကြသည်။ တစ်ယောက်က အရက်သောက်သည် နောက်တစ်ယောက်က လုံးဝ မသောက်ချေ။ တစ်နေ့ အရက်သောက်သူ အရက်မူးမူးဖြင့် ကားတက်မောင်းသည်။အရက် မသောက်သူကို တက်ကြိက်မိသည်။ အရက် မသောက်သူ ပွဲချင်းပြီး သေသွားသည်။
တယ်လီဖုန်းသံ မြည်လာသည်။ ခွေးမှလွဲ၍ အိမ်ထဲတွင် မည်သူမှ မရှိချေ..... တယ်လီဖုန်းကို ခွေး ကောက်ကိုင်လိုက်သည်။
ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက် အများသုံး အိမ်သာထဲထိုင်နေသည်။ ကိစ္စပြီးသောအခါအိမ်သာထဲ စက္ကူရှာသည်။ ဘယ်မှာမှ မတွေ့ချေ။ ထို့ကြောင့် ဘေးခန်းကို တံခါးခေါက်ပြီး မေးသည်။
"အင်း ခေါင်းက နောက်နေတယ်၊ အစာအိမ်လည်း သိပ်မကောင်းဘူး၊ ဒီကြားထဲခင်ဗျားရဲ့ သွေးတိုးနှုန်းက အတော်လေး မြင့်နေပြန်တယ်။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားအသက်ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ"
"ကျွန်တော့် ဇနီး ခြောက်ယောက်မြောက် ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်ရဲ့ ဖန်းတီးနိုင်မှုစွမ်းအားကို တခြားနေရာမှာ အသုံးချရတော့မယ်လို့ နားလည်လိုက်ကတည်းကပဲဗျာ။"﻿
Posted by စန္ဒကူး at 10:36 PM
Labels: ရီမလား ပြုံးမလား